बालबालिकाको शिक्षामा आवश्यकता | बेजिया
मारिया जोस रोल्डन | 18/06/2022 12:31 | बच्चाहरूलाई सिकाउनुहोस्
यद्यपि धेरै आमाबाबुले यसको विपरीत सोच्न सक्छन्, छोराछोरी हुर्काउनको लागि आवश्यकता बिल्कुल उचित छैन। आदर्श मध्य मैदानमा पुग्नु हो, न त धेरै न धेरै थोरै।
निम्न लेखमा हामी शिक्षामा आवश्यकताको बारेमा तपाईलाई हुन सक्ने सबै शङ्काहरू स्पष्ट गर्दछौं र यसलाई व्यवहारमा कसरी राख्ने।
1 के को लागि आवश्यकता छ?
2 कुन बिन्दुमा आवश्यकतालाई अत्यधिक मानिन्छ?
3 दिइएको माग अनुसार अभिभावक वर्ग
4 अभिभावकत्वमा कहिले लचिलो हुनु पर्छ
के को लागि आवश्यकता छ?
सबै कुराको कुञ्जी साना बच्चाहरूको शिक्षामा यस्तो आवश्यकता कसरी लागू गर्ने भनेर जान्नु हो। सामान्यतया, आवश्यकताले बच्चालाई इष्टतम र उपयुक्त तरिकाले चीजहरू गर्न मद्दत गर्न सक्छ, तर कहिलेकाहीं यस्तो मागले बच्चामा बलियो दबाब उत्पन्न गर्न सक्छ जसले उसलाई भावनात्मक रूपमा असर गर्छ। त्यसकारण के आवश्यक छ त्यसमा सन्तुलन कायम गर्नु र बच्चाहरूको लागि उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त गर्नु साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ।
कुन बिन्दुमा आवश्यकतालाई अत्यधिक मानिन्छ?
जब बच्चा दबाबमा हुन्छ र सिर्जना गरिएका अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसकेकोमा उसलाई नराम्रो लाग्छ भने माग अत्यधिक हुन्छ। आवश्यकतामा बच्चालाई सिकाउने उद्देश्य हुनुपर्छ र उसले कुनै पनि काम गर्नु अघि उसलाई दबाब दिनु हुँदैन। बच्चाहरु मा अत्याधिक माग को नतिजा निम्न छन्:
डर र निराशाको डर।
व्यवहार र आचरण विकारहरू।
तनाव र चिन्ता।
अन्य बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्याहरू।
दिइएको माग अनुसार अभिभावक वर्ग
आफ्ना छोराछोरीमा राखिएको अत्यधिक माग अनुसार तीन प्रकारका अभिभावकहरू छन्:
पहिलो स्थानमा ती कठोर आमाबाबुको रूपमा चिनिन्छन्। अभिभावकहरूको यो वर्गले बानीपूर्वक सजायको सहारा लिने र आफ्ना छोराछोरीको शिक्षाको कुरा गर्दा धेरै कठोर हुन्छन्। तिनीहरू आफ्ना बालबालिकाको जीवनमा एकदमै कडा नियन्त्रणको अभ्यास गर्छन् र त्रुटिहरू र गल्तीहरूको सामना गर्दा तिनीहरू पूर्ण रूपमा असहिष्णु र अकर्मण्य हुन्छन्।
दोस्रो प्रकारका अभिभावकहरू उच्च अपेक्षाहरू भएका हुन्। तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूमा उत्कृष्ट परिणामहरू आशा गर्छन् जुन कहिलेकाहीं साँच्चै अप्राप्य हुन जान्छ। यी सबैको अर्थ केटाकेटीहरूको निराशाको स्तर धेरै उच्च छ। र अक्सर उच्च दबाब मा प्रदर्शन।
तेस्रो प्रकारका अभिभावकहरू अति सतर्क हुन्छन्। तिनीहरू ती हुन् जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निरन्तर निगरानी गर्छन् र उनीहरूलाई यस्तो तरिकाले अतिरक्षा गर्छन् कि अभिनयको कुरा आउँदा उनीहरूसँग सायद स्वायत्तता र स्वतन्त्रता हुँदैन। यस्तो नियन्त्रण र अतिसंरक्षणले प्रायः बालबालिकाको भावनात्मक विकासमा नकारात्मक असर पार्छ।
अभिभावकत्वमा कहिले लचिलो हुनु पर्छ
जब सप्ताहन्त आइपुग्छ तपाईले माग कसरी पार्क गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ र बच्चाहरु संग धेरै लचिलो बन्नुहोस्।
आवश्यकता सिफारिस गरिएको छैन जब बच्चाहरु धेरै साना हुन्छन्।
यदि बच्चा धेरै संवेदनशील छ तपाईं आफ्नो व्यवहार मा अधिक लचिलो हुनु पर्छ।
बच्चाहरूले गल्ती गर्ने भएकाले केही हुँदैन। गल्तीहरू आवश्यक छन् जब यो सानाहरूलाई शिक्षित गर्न आउँछ।
बच्चा हुँदा तपाईं picky हुन सक्नुहुन्न तिनीहरू खेलिरहेका छन् वा आफ्नो खाली समयको मजा लिइरहेका छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » मद्रेस » बच्चाहरूलाई सिकाउनुहोस् » बालबालिकाको शिक्षामा आवश्यकता